Tag: ịkwụ ụgwọ infographic | Martech Zone
Tag: ozi ịkwụ ụgwọ
N'ime afọ ole na ole gara aga, ịzụrụ ihe n'ịntanetị agbanweela n'ụzọ dị ukwuu n'ịntanetị. Inwe saịtị a tụkwasịrị obi nọgidere na-abụ isi okwu metụtara azụmahịa ọ bụla yana ndị ahịa na-azụkarị site na saịtị ha nwere ike ịtụkwasị obi. E gosipụtara ntụkwasị obi ahụ site na asambodo ndị ọzọ, nyocha intaneti, ma ọ bụ ọnụnọ ụlọ ahịa mpaghara. Ka azụmahịa na-aga n'ihu n'ịntanetị, n'agbanyeghị. 40% nke ndị ọrụ glontanetị n’ụwa niile - ihe karịrị otu ijeri ndị ọrụ - emeela a